Ahoana ny fomba hijerena sarimihetsika efa hitanao amin'ny Netflix ▷ ➡️ Emulator.online ▷ ➡️
Mijery ny sarimihetsika efa hitanao en Netflix
foana mitovy ihany ny tantara: aorian'ny de misafidy tsara un horonan-tsary for fikarohana Netflix ary nanomboka a mamerina azy, te ny kaonty de de efa hitanao ny lohateny voafantina. Mba hisorohana ny toe-javatra toy izao indray dia tianao Saber raha azo atao ny mahita ny lisitr'ireo lohateny efa hita tao amin'ny Netflix tamin'ny fomba hanoratana ireo efa nilalao.
Raha marina ny raharaha como el Notantaraiko izy ireo ary mbola manontany tena ianao ny fomba hijerena sarimihetsika efa hitanao amin'ny Netflix, avelao aho hanome anao ny fampahalalana rehetra ilainao hahomby amin'ny ezaka ataonao. Raha omenao ahy minitra vitsy amin'ny fotoananao malalaka ianao dia azoko aseho anao ny fomba fiasa amin'ny an-tsipiriany amin'ny fijerena ny atiny rehetra izay efa nojerenao tamin'ny serivisy fandefasana horonantsary malaza.
Ary koa, hahafaly ahy ny mampiseho vahaolana vitsivitsy hahafahanao manaraka ny sarimihetsika efa nojerenao, mba tsy to lose fotoana sarobidy amin'ny fifidianana lohanteny izay afaka mba mamantatra efa hitanao io. Raha izany no tena tianao ho fantatra fa tsy azonao atao andraso handinika lalina ilay resaka, andao tsy handeha lavitra intsony ary hankany am-pon'ny torolàlana ity. Mamaky soa ary indrindra indrindra, mifalia!
Ahoana no ahitanao ny sarimihetsika efa nojerenao tao amin'ny Netflix
Ahoana ny fomba hitaterana horonantsary efa nijery tao amin'ny Netflix
Ahoana ny fomba hamafana ireo sarimihetsika efa nijerena tao amin'ny Netflix
fro mahita sarimihetsika efa hitanao tao amin'ny Netflix
Si tu fikasana dia mijery sarimihetsika efa hitanao tao amin'ny Netflix, tsy maintsy fantaro fa tsy manisa ny serivisy video streaming malaza amin'ny fiasa manokana mamela anao hijery haingana ny sarimihetsika rehetra lalaovina sy efa hitanao.
Ho an'ny andian-dahatsoratra Amin'ny fahitalavitra, amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny takelaka famaritana ho an'ilay olona tianao, dia ho hitanao haingana raha misy sy ny fizarana nilalao. Raha ny tena izy, eo amin'ny sary mialoha ny fizarana tsirairay hita dia hita ny iray boaty mena hanondroana fa navoaka ny atiny resahina. Na izany aza, tsy mitranga amin'ny sarimihetsika izany ary, noho izany, tsy azo atao ny manavaka lohateny efa hita amin'ny iray izay mbola ny ho hita.
Ka ahoana no ahitanao ireo sarimihetsika efa hita tao amin'ny Netflix? Ny vahaolana tokana azonao ampiasaina dia ny fidirana amin'ilay faritra Hetsika fampisehoana votoaty avy amin'ny kaontinao, izay ahafahanao mijery sy misintona ny lisitry ny atiny feno (na sarimihetsika na andian-tsarimihetsika) jerena ao amin'ny Netflix. Raha manao izany ianao dia ho afaka hahita ny lohateny efa hita sy manoratra an-tsoratra azy ireo amin'ny fampiasana fitaovana sasantsasany izay hasehoko anao ao amin'ireo andalana manaraka amin'ity boky ity.
Raha heverinao fa vahaolana mety ity hijerena sarimihetsika efa hitanao amin'ny Netflix dia atombohy amin'ny solosainao ny browser. chrome, Edge, Safari sns) ary mifandray amin'ny pejy fandraisana Netflix. Raha mbola tsy nametraka fidirana mandeha ho azy ao amin'ny kaontinao ianao dia kitiho ny bokotra Midira, midira ny tahirin-kevitra any an-tsaha Mailaka na laharana finday mi tenimiafina ary tsindrio ny bokotra Midira, hiditra ary hisafidy ny anao mombamomba ny fahitana.
Aorian'io, tsindrio nyprofile picture mifandraika amin'ny kaontinao, eo amin'ny farany havanana dia safidio ny safidy kaonty avy amin'ny menio izay misokatra ary, ao amin'ny vaovao efijery izay miseho, tadiavo ny faritra Tetikasa sy sivana fianakaviana. Avy eo dia tsindrio ny kisary arrow manondro mifandraika amin'ny mombamomba anao mijery ary safidio ny safidy Hetsika fampisehoana votoaty, hijerena ny lisitry ny atiny nilalao (manomboka amin'ny farany ka hatramin'ny zokiny indrindra).
Izao fotsiny no tokony hataonao dia ny mitadiavana sy manazava an-tsary ireo sarimihetsika efa hitanao. Raha mahita lisitry ny atiny voahena ianao, kitiho ny bokotra Ampisehoy ny hafa hahitanao lohateny fanampiny izay efa nilalaovanao tamin'ny mombamomba anao hijerena (ity lisitra ity dia tsy misy atiny izay hitan'ny olona hafa mampiasa ny kaontinao miaraka amin'ny mombamomba anao).
Raha te hampidina ny lisitra ianao amin'ny solosainao, kitiho ny safidy Ampidino izy rehetra, hanombohana ny fisintomana ny rakitra CSV izay misy ny zavatra jerenao ary azonao atao ny mijery sy manova miaraka a fandaharana como el Mijoroa mi LibreOffice. Amin'izay lafiny izay dia mety hanampy ahy ny torolalana momba ny fanokafana rakitra CSV.
Ary farany dia manondro izany aho amin'ny finday sy ny takelaka, mampiasa ny rindrambaiko Netflix ho an'ny fitaovana Android (misy ihany koa amin'ny magazay hafa, ho an'ny fitaovana tsy misy tolotra avy amin'i Google) ary iPhone / iPad, tsy afaka jerenao ny zavatra jerenao. Na izany aza, raha tsy manana solosaina eo am-pelatananao ianao dia azonao atao ny mandefa ilay navigateur apetraka amin'ny fitaovanao (oh. chrome amin'ny Android e Safari amin'ny iPhone / iPad), mifandray amin'ny tranokala Netflix ofisialy ary midira ao amin'ny kaontinao.
Amin'izay fotoana izay, tsindrio ny bokotra ☰, ankavia havia, safidio ny safidy kaonty ary hitanao ilay fizarana Tetikasa sy sivana fianakaviana. Fidio ny anao mombamomba ny fahitana ary hikasika ilay safidy Hetsika fampisehoana votoaty, hijerena ny atiny rehetra nolalaovinao tao amin'ny Netflix. Amin'ity tranga ity, azonao atao ny misintona ny lisitra voalaza amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra Download.
Izao dia nahavita nahita ny tantaranao nizaha ny Netflix ianao ary nahita hoe inona ny sarimihetsika efa nojerenao, manoro hevitra anao aho hanoratra ireo lohateny voalaza. Tokony ho fantatrao kosa fa ny serivisy horonantsary malaza dia tsy manana fiasa mamela anao hanao izany ary, vokatr'izany dia ilaina ny manana vahaolana avy amin'ny antoko fahatelo.
Anisan'ireo tiako amporisihina tendrombohitra an'ny fahitalavitra, fampiharana maimaimpoana ho an'ny Android sy iPhone / iPad fitaovana ahafahanao manoratra an-tsary ny horonan-tsary sy andian-tsarimihetsika rehetra efa hitanao, miaraka amin'ny mety hampiakatra ny naotinao ho an'ny atiny tsirairay hita.
Raha heverinao fa vahaolana ara-dalàna ny TV Time hanoratanao an-tsary ireo horonantsary efa hitanao tao amin'ny Netflix, ampidino ary alefaso ilay fampiharana apetraka, kitiho ny bokotra Atombohy izao ary safidio ny iray amin'ireo safidy azo atao mamorona ny kaontinao (oh. Misoratra anarana amin'ny Google hampiasa ny kaonty Google anao na Misoratra anarana amin'ny Facebook hisoratra anarana amin'ny kaonty Facebook sns).
Raha aleonao misoratra anarana amin'ny adiresy mailakao, kitiho ilay entana Jereo safidy hafa ary tsindrio ny kisary busta. Avy eo ampidiro eo amin'ny sehatry ny angon-drakitra takiana karazana verinia mi tenimiafina ary hikitika ny bokotra Registrarse, hamoronana kaontinao ary hiditra amin'ny Fotoana TV.
Amin'io fotoana io, raha manomboka manampy ireo sarimihetsika voamarikao teo amin'ny tantaran'ny fijerinao an'i Netflix dia tsindrio ilay zavatra Mba hahitana, ampidiro ny lohateny an-tsarimihetsika raha te hitantara ny fahitana azy eny an-tsaha fikarohana ary, amin'ny valin'ny fikarohana, kitiho peta-drindrina amin'ilay sarimihetsika resahina.
Ao amin'ny efijery vaovao hiseho, tsindrio ny bokotra ✓ hanondroana fa efa hitanao io anaram-boninahitra io ary, raha tianao, ampio koa ny naotinao amin'ny alàlan'ny safidy Omeo isa ity sarimihetsika ity, Inona no fahatsapana azonao? mi Iza no tianao indrindra?. Ary koa, ao amin'ilay faritra Taiza no hitanao?, azonao atao ihany koa ny misafidy ny safidy Netflix (na ny serivisy mahaliana anao), hanondroana fa efa nahita an'ity sarimihetsika ity ianao tamin'ny Netflix.
Azafady azafady fa misy koa ny TV Time amin'ny kinova web azo idirana amin'ny browser. Na izany aza, farafaharatsiny amin'ny fotoana manoratra ity torolàlana ity, dia mbola tsy azo atao ny manazava an-tsary ny sarimihetsika vaovao izay efa nojerena na jerena ny sarimihetsika nampidirin'ny fampiharana serivisy.
Rehefa avy nisintona ny lisitry ny fijerinao ianao ary nanoratra ireo sarimihetsika rehetra efa nojerenao, araka ny natoroko anao teo amin'ireo andalana teo alohan'ity torolàlana ity dia azonao atao raha tianao. hamafa ny tantaram-pizahanao Netflix.
Para hacerlo solosaina, mifandray amin'ny tranokala ofisialin'ny serivisy ary, raha mbola tsy nanao izany ianao dia midira amin'ny kaontinao. Tsindrio avy eoprofile picture mifandraika amin'ny kaontinao, safidio ny safidy kaonty avy amin'ny menio naroso, tadiavo ny faritra Tetikasa sy sivana fianakaviana ary tsindrio ny anao mombamomba ny fahitana.
Tsindrio ilay singa Hetsika fampisehoana votoaty, hijerena ny tantaran'ny fijerinao ary tsindrio ilay safidy Afeno amin'ny tantara (ny kisary nataon'i faribolana) mifandraika amin'ny atiny tianao esorina amin'ny lisitry ny fiambenana. Avereno ny fomba fiasa ho an'ny lohateny tianao rehetra.
Raha tianao ny hanohy amin'ny finday sy ny takelakaAmin'ity tranga ity dia tsy maintsy ampiasainao ny tranokala napetraka ao amin'ny fitaovanao. Mifandraisa amin'ilay tranokala Netflix ofisialy ary midira ao amin'ny kaontinao. Tsindrio, avy eo, eo amin'ny bokotra ☰, safidio ny safidy kaonty ao amin'ny menio manokatra sy manery ny anao mombamomba ny fahitana ao amin'ny fizarana Profil ary sivana mahazatra.
Amin'ity fotoana ity dia hikasika ilay zavatra Hetsika fampisehoana votoaty, hahitanao ny atiny rehetra nilalao tao amin'ny Netflix, ary tsindrio ilay kisary faribolana mifandraika amin'ireo lohateny izay kasainao esorina amin'ny hetsika fijerinao. Ho an'ny fomba fiasa amin'ny antsipiriany, avelako ianao miaraka amin'ny mpitari-dalana ahy amin'ny fomba fanadiovana ny tantaran'i Netflix.
Ahoana ny fanesorana kaonty Telegram